बखत बिष्टको अभिनयमा ‘लक डाउन २’ छोटो कथामा भिडियो सार्वजनिक (भिडियो सहित)
कोरोनाको कहर विश्वव्यापी व्याप्त छ । कोरोनाको संक्रमण फैलिन सक्ने भन्दै सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि देशव्यापी लकडाउन गरेपछि काम बन्द भई अधिकांश परिवार को चुल्हो बल्न बन्द भइसकेको छ। लकडाउनको प्रभाव आम सर्वसाधारण देखि हरेक क्षेत्रमा देखिएको छ।
दैनिक मजदूरी गरी परिवारको गुजारा चलाउँदै आईरहेका मजदुरको लकडाउनका कारण मजदूरी नै बन्द भएपछि बालबच्चासहित परिवारका सदस्य भोकभोकै बस्न बाध्य छन्।
कोरोनाको कारण भन्दा पनि आफ्ना साथीभाई तथा छरछिमेकले सहयोग नै नगर्दा दु:ख पाउनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ। यसै लकडाउनको बिषयको कथा समेटिएको छोटो चलचित्र ‘लकडाउन २’ सार्वजनिक गरिएको छ । दिपसिरु मीडिया प्रा. लि. को ब्यानरमा निर्माण भएको चलचित्रमा भाइरल जोडी ”बखत र प्रतिभा” का बखतको अभिनय रहेको छ।
युट्युवमार्फत सार्वजनिक भएको चलचित्रमा बखतको साथमा सुधिर बुढाथोकीको पनि अभिनय रहेको छ। लकडाउनले परेको प्रभाव र आफ्नाले यस्तो परिस्थितिमा चटक्क छोडेर जाँदाको पिडा अत्यन्त मार्मिक ढंगले प्रस्तुत गरिएको छ। बखत र प्रतिभाले अभिनय गरेको अर्को छोटो चलचित्र “लकडाउन” यसभन्दा अगाडी युट्युव च्यानल रंगिन टिभीमार्फत सार्वजनिक भइसकेको छ ।
हेर्नुस् यो चलचित्र ‘लकडाउन २’ को भिडियो :